Ukubeka amabhande - isiqinisekiso sokuphila
Umthetho, Ezempilo Nokuphepha
Abameli bezobuchwepheshe ezahlukene: abafakisi, abacimi bomlilo, abahlengikazi, abagibeli bezimboni - bavame ukwenza umsebenzi ohlobene nokuphakama. Kudinga ukusetshenziswa kwezinyathelo zokuphepha ezikhethekile futhi kufanele kungabandakanyi ukwehla okungenzeka kwesisebenzi.
Ukuze kuqinisekiswe ukuphepha nokuziphatha kwalolu hlobo lomsebenzi, kunezindlela ezinjalo zokuvikelwa ngabanye, njengebhande elibhekele ukuphepha. Ukuphila komuntu ngokuqondile kuxhomeke kulezi zixhobo, ngakho-ke amabhande aphakanyiswayo ayenziwe ngezinto eziphakeme kakhulu ezisebenzisa ubuchwepheshe obuphezulu.
Kuye ngokubanzi kwesicelo, ibhande elikhulayo angeke libe yisisekelo kuphela, kodwa futhi ithuluzi elisizayo. Abacimi bomlilo kanye nabahlengikazi basebenzise ukukhipha izisulu.
I-harness yokuphepha, noma i-harness yokuvimbela, ivikela umuntu ukuba awe ekuphakameni. Ubamba futhi ulungise isisebenzi ngezigxobo eziqondile, ngaphandle kokubeka isiteji nokuwa.
Lapho usebenza emigqeni yokuxhumana nemigqa yamandla.
Emibhoshini yamafutha nomsakazo.
Lapho ukwakhiwa kwezakhiwo eziphakeme.
Lapho usebenza emithonjeni nasemagodini.
Lapho kuhlanzwa kusebenza.
Lapho ulungisa imishini enamandla kuma-enterprises.
Ukubopha amabhande kubambelela umzimba womuntu, kungamvumeli ukuba akalimele emoyeni okhukhumezayo ngenxa yezingxabano esakhiweni, ngaphandle kokuthi kungenzeka ukuthi aphule noma aguqulwe. Imishini ekhethiwe ngokucophelela ivikela isisindo sesisebenzi futhi ivimbela amathuba okuthuthukisa i-radiculitis, i-osteochondrosis, ukuhlukana kwemisipha ye-dorsal ngenxa yokuphakamisa nokuhamba ngezinyawo ekuphakameni.
Izinhlobo nezinhlobo zemishini ephakeme kakhulu
Zonke amabhande asetshenziselwa ukuphakama zingaba izinhlobo ezimbili: ukuphepha nokufakwa.
Uhlobo lokuqala lusetshenziselwa ukuphatha, ukususwa kwabantu noma imisebenzi edinga ukulenga, ukunyakaza emgqeni wokuphepha. Ngokuvamile kufakwe izibopho zehlombe ehlathini emuva, futhi isambatho esengeziwe esifubeni. Ibhande elinjalo linokwethenjelwa kakhulu, linamathele kahle.
Ukukhishwa amabhande kuklanyelwe kuphela ukulungiswa endaweni ephakeme. Ngokuyinhloko, lo mshini uwuhlobo lwe "kushak" olubhekwa ngenduduzo enkulu. I-waistband ihlanganisa isiqhwa sesisebenzi, inikezwa ngamasongo okuqinisa, lapho imigqa yokuphepha ifakwe khona. Ubude be-lanyard bubalwa ngendlela yokuthi uma umsebenzi ephuka edizeni lwesakhiwo, ukuphakama kokudonsa akudluli isigamu samitha. Ezimweni ezinjalo, izinhlobo eziningi zamabhande zinamathelethi wokushisa.
Amabhande omhlangano wokuqala wokuhlolwa aqhutshwa e-factory. Zitholakala emithwalweni emihle futhi enamandla. Kuzo amathegi axhunyiwe nosuku lokuhlola.
Emabhizinisini nasezinhlanganweni, zonke izinhlobo zamabhande ngaphambi kokukhishwa kwabasebenzi zihlolwe ngeso lengqondo ngenxa yokutholakala kwemigqa yemigqa, izinhlaka zokugqoka izigqoko, imoto.
Ngaphezu kwalokho, kanye ngonyaka ukuvivinya kwamabhande okukhulayo kwenziwa enhlanganweni ekhethekile, lapho kuhlolwa khona ngokugcwele usebenzisa imithwalo esheshayo neyenamandla. Amabhande angadluli ukuhlolwa anqatshiwe.
Izivivinyo zenziwa ngokuhambisana ne-GOST, idokhumenti, amathegi afakwe kumabhande anosuku lokuhlola oluvamile.
Izinhlobonhlobo zezintambo zokubhanca amabhande
Izindwangu ezifakwe ngaphakathi kwithiyithi yokuvikela ingenziwa ekhiphethini yekhasi noma ku-chain. Izindwangu zamaketanga zisetshenziselwa umsebenzi ohlobene nendawo enonya, izinhlansi, amalangabi, insimbi eshisayo.
Ngakho-ke, ukuze usebenze ngokuphakama, udinga ukuthenga ibhande elikhulayo. Amanani ayo amanani avela ku-270 kuya ku-1600 ruble.
Amaphepha avamile okuphepha komlilo ezinhlanganweni zazo zonke izinhlobo zobunikazi
Izindawo zangasese (SPZ): incazelo, ubukhulu, umthetho
Uyini umthetho wokuvikela impilo yezakhamuzi kanye nencazelo ebusweni bomphakathi
Incwadi evamile yokuphepha emlilweni yendawo yehhovisi
"Stalker: War of the maqembuqembu." Futhi uhlangothi ingabe ukhethe?
Inkosi - sikhona ukuze mkhakha? Lapho bafundise umkhwenyana?
Bezuglevodnyya Ukudla. Imenyu kanye nemiphumela
Libra futhi Sagittarius - Oluvumelana ukudlala futhi Ukungaqiniseki
Plastic utshani igridi: izinhlobo, izici kanye ukufakwa Izibuyekezo
Izibonelo ... antinomy - Antinomy
Isudi amadoda kwesitayela sika - isihluthulelo sempumelelo!